Amasistimu Wezingcingo Zomlilo-Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Imakethe Yezinqubo Zocingo Lomlilo
Isikhathi: 2021-03-23 Hits: 10
Umbiko olayishwe kamuva okuyiGlobal Izinhlelo Zocingo Lomlilo Ukukhula Kwemakethe 2021-2028 kunikeza ukuhlolwa okujulile kwamapharamitha abalulekile athinta ukukhula kwemakethe. Umbiko uveza imininingwane eqondakalayo yokuthi amakhasimende angalithuthukisa kanjani ikhono labo lobuholi elibucayi emakethe yomhlaba wonke yezingcingo zomlilo. Umbiko uqukethe izilinganiso zosayizi wemakethe, amathuba okukhula kwemboni kanye nezinselelo, izitayela zamanje zezimakethe, abadlali abangaba khona, nokusebenza okulindelekile kwemakethe kungekudala emhlabeni jikelele. Umbiko uhlukanisa izitayela eziguquguqukayo eziqhubekayo emkhakheni wezamabhizinisi nokuncintisana nentuthuko kwi-CAGR ngesikhathi sesimo sezulu kusukela ngonyaka wezi-2021-2028. Izishayeli zokumaketha zakamuva kakhulu eziyisisekelo sokurekhoda, ukusebenza kwemakethe, kanye nezinketho ezibalulekile zenqubekela phambili nokukhiqiza zifakwa embikweni.
Umbiko ucabanga ngemakethe'Amathrendi wakamuva, acacisa izibalo zamanje zemakethe, ngaphezu kwezibikezelo zesikhathi esizayo zemakethe. Izimboni ezisezingeni eliphezulu zibhaliswa ukuze zithole ukuqonda kwebhizinisi lokungena. Izinkampani ezifakwe kulo mbiko wocwaningo zifaka imininingwane ezinhlotsheni zomkhiqizo, izici, umthamo, kanye nokukhiqiza. Umbiko usabalalisa abashayeli bezentuthuko abalulekile nezimakethe ezinzima. Ukulinganiselwa nokuhlolwa kwamathemba emakethe Yomhlaba Wonke Yezingcingo Zomlilo ngombiko ocwaningwayo wemakethe onezindlela ezimbalwa eziqukethe izinto ezibalulekile ezimataniswa nemakethe.
Ukuhlukaniswa kwe- imakethe ye-Fire Telephone Systems inikezwe ngesisekelo sohlobo lomkhiqizo, uhlelo lokusebenza, Abadlali Abakhulu Abakhulu kanye nesifunda. Zonke izingxenye ziye zahlaziywa ngokuningiliziwe, futhi idatha ephathelene nokukhula kwesigaba ngasinye ifakiwe ekuhlaziyweni
Ngokwengeziwe, kunikeza ukuqonda okucacile kwezimpawu zezimakethe ze-Fire Telephone Systems zomhlaba wonke njengevolumu yokukhiqiza, amanani, amasheya emakethe nosayizi. Iphinde ichaze ngezinto zokuhweba zomhlaba wonke njengokungenisa, ukuthekelisa, kanye nokusetshenziswa kwendawo. Ngaphezu kwalokho, inikeza indawo yokuncintisana yemakethe yomhlaba wonke yezingcingo zomlilo ngokunikeza amaphrofayli ebhizinisi ezimboni ezahlukahlukene ezisezingeni eliphezulu. Ngokubambisana, ihlinzeka ngemininingwane esesikhathini yemakethe Yomhlaba Yocingo Lomlilo ezoba wusizo ekuthatheni izinqumo ezinolwazi emabhizinisini.
Ukuxhumana kweYuyao Xianglong iyi-OEM ne-ODM yazo zonke izinhlobo zocingo lwezimboni nezesekeli ezihambisanayo kusukela ngo-2005. Izicingo zocingo zomlilo kubuye kube wububanzi bokukhiqiza obunyuke kakhulu eminyakeni yakamuva. Ngakho-ke uma unesidingo sezingcingo eziphathwayo zomlilo, wamukelekile ukuxhumana nathi nge-imeyili sale01@yyxlong.com noma ucingo oluqondile 008613858299721.
Okwedlule: Umbiko Wokucwaninga Ngemakethe Yomhlaba Wonke
Okulandelayo: Ukuxhumana kweXianglong-uzakwethu obalulekile kubakhiqizi bokugcina abazisebenzelayo